Maninona Vietnam no mitady mpitsidika maraokana ary ny mifamadika amin'izany
Home » Lahatsoratra farany farany » Tourism » Maninona Vietnam no mitady mpitsidika maraokana ary ny mifamadika amin'izany
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany momba an'i Maraoka • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao Mafana Vietnam
Ny praiminisitra maraokana Saad Eddine El Othmani dia nilaza tamin'ny fandraisana an'i Vo Van Thuong, mpikambana ao amin'ny Politburo, sekreteran'ny antoko kominista ao Vietnam (CPV) komity foiben'ny komisionan'ny komity foibe CPV na fampahalalana sy fanabeazana, fa ny finamanana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Vietnam sy Morocco dia fifandraisana manokana sy akaiky, izay natsangana nandritra ny tolona taloha ho an'ny fanafahana nasionaly ny firenena roa tonta.
Nasongadin'ny PM Othmani fa ny fiaraha-miasa roa tonta amin'ny toekarena, varotra, fampiasam-bola ary kolontsaina dia mbola tsy nifanaraka tamin'ny fifandraisana politika tsara teo amin'ny firenena roa tonta ary koa ny mety ho vitan'izy ireo. Te hanatsara ny fiaraha-miasa amin'i Vietnam amin'ny sehatra samihafa izy ary manao ny ezaka rehetra hampiroboroboana ny fifandraisana misy eo amin'ny governemanta roa tonta.
Nanolo-kevitra ny praiminisitra fa hametraka avy hatrany ny fifanarahana fiaraha-miasa vita sonia, hanatsara ny fifampidinihana ara-politika ary ny fifanakalozana delegasiona amin'ny ambaratonga rehetra, ary hanohy ny rafitra fananganana hamoronana fepetra mety amin'ny fiaraha-miasa matanjaka eo amin'ny orinasany.
Vo Van Thuong dia namerina ny politika tsy miovaova ataon'ny antoko Vietnamese Party sy ny fanjakana amin'ny fanitarana ny finamanany sy ny fiaraha-miasa amin'ny firenena rehetra ho an'ny fandriam-pahalemana sy ny fampandrosoana ao amin'ny faritra sy izao tontolo izao sady mitazona ny fifandraisana amin'ny namana nentim-paharazana, ao anatin'izany i Maraoka, izay mamaritra ny firenena ho iray amin'ireo laharam-pahamehana Vietnam. mpiara-miasa ao Afrika Avaratra. Nisaotra ny praiminisitra maraokana sy ny governemanta ihany koa izy noho ny fanohanany ny filatsahan-kofidian'i Vietnam hahazoana toerana tsy maharitra ao amin'ny filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana ho an'ny taona 2020-2021.
Nilaza i Thuong fa vonona ny hiasa amin'ny tetezana i Vietnam mba hanampiana an'i Maraoka hanitatra ny fifandraisany amin'ireo firenena Aziatika atsimo atsinanana, indrindra amin'ny toe-java-misy izay i Vietnam dia handray ny toeran'ny ASEAN Chairmanship amin'ny taona 2020. Naneho ny fanantenany izy ny hisian'ny fiaraha-miasa matanjaka miaraka amin'i Maroc amin'ny lafiny rehetra , manokana ny fizahan-tany, ny kolontsaina, ny angovo madio ary ny fambolena.
Raha tany Maraoka i Thuong dia nihaona tamin'ny filohan'ny Antenimieram-pirenena maraokana Habib El Malki, nandritra izay dia nilaza izy fa ny fampitomboana ny fifanakalozana solontena parlemantera ambony dia hanampy amin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta amin'ny ho avy. Niantso ny mpanao lalàna marokana izy mba hanara-maso sy hamorona fepetra mahasoa amin'ny fampiharana ny fifanarahana fiaraha-miasa izay nosoniavin'ny governemanta roa tonta. Ho valin'izany, nilaza i Malki fa hiara-hiasa amin'ny governemanta maraokana ny Antenimieram-pirenena mba hamolavola rafitra fanaraha-maso ny asa fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta, eo am-panamafisana ny fifanakalozana amin'ny Vondron'ireo Parlemantera Fisakaizanan'i Vietnam-Morocco.
Thuong dia nampita tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena vietnamiana Nguyen Thi Kim Ngan fanasana ho an'ny filoham-pirenena hitsidika ofisialy any Vietnam. Nandritra ny fandraisana dia nanasa ny PM Nguyen Xuan Phuc izy mba hitsidika amin'ny fomba ofisialy any Vietnam ihany koa. Nandritra ny fihaonana tamin'ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera maraokana, Mohamed Laarej, nanolo-kevitra ny firenena roa tonta hanamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra roa tonta, indrindra ny fizahan-tany, sinematografia, gazety, literatiora ary zavakanto.
Tamin'ny 17 Jona, Thuong dia nanao fihaonana manokana tamin'ny filohan'ny filan-kevitry ny faritra Casablanca-Settat sy ny governoran'i Casablanca. Avy eo ny 14 Jona dia nanao dinika niaraka tamin'ny mpitarika antoko efatra tao amin'ny governemanta mariky ny maraokana izy, izay nilaza fa te-hanamafy sy hanatsara ny fiaraha-miasa amin'ny CPV, indrindra amin'ny fananganana antoko sy ny fikarohana teorika.
Niantso an'i Vietnam i Thuong mba hanampy an'i Maraoka hanatsara ny fifamatorana amin'ireo firenena Aziatika atsimo atsinanana, amin'ny filazany fa manantena ny ho tonga mpanara-maso ny Antenimiera Iraisam-pirenena parlemantera i Morocco. Nifanaraka ny roa tonta fa hampitombo ny fifanakalozana delegasiona amin'ny ambaratonga rehetra ary hitazomana ny fizarana vaovao sy traikefa, fifanakalozana kolontsaina eo amin'ny fikambanan'ny tanora sy ny vehivavy, ary ny fifanakalozana isam-batan'olona.
Nanaiky ny hikarakara herinandro ara-kolontsaina isaky ny firenena ny governemanta roa tonta mba hampitombo ny fifankahazoana eo amin'ny samy Vietnamianina sy ny maraokana.